PUNTLAND: Goaankii Parlamanka Puntland ee Koonteenarada oo aan Dheg Jallaq loo siin – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
PUNTLAND: Goaankii Parlamanka Puntland ee Koonteenarada oo aan Dheg Jallaq loo siin
Allhadaaftimo July 27, 2019 Uncategorized
Xukuumadda Puntland ayaa dheg jalaq u siin go’aanka ka soo baxay Baarlamaanka, kaas oo lagu mamnuucay konteenarada laga soo dejiyo dekedda Berbera ee Somaliland.
Baarlamaanka Puntland ayaa go’aan ay soo saaareen 8-bishan July ku macnuucay konteenarada laga soo dejiyo dekedda Berbera , ee la keeno degaannada Puntland. waxayna Goluhu sheegeen in ay curyaamin ku yihiin dekedda magaalada Boosaaso oo laf dhabar u ah ganacsiga Puntland.
Guddiga dhaqaalaha Baarlamaanka oo warbixin jeediyay xiligaas ayaa tilmaamay in konteenarada laga soo dejiyo dekedda Berbera ay fududeeyeen Wasaarahada Maaliyadda iyo Ganacsiga Puntland, ayna sababi karto arrintaasi in ay howl-gab noqoto dekedda Boosaaso, oo ay xuseen in taxaa laga yaabo in xoolaha laga dhoofiyo loo wareejiyo Berbera, madaama doonyihii qaadi jiray oo badeecooyinka keeni jiray ay joog sadeen.
Kadib go’aankii ka soo baxay Baarlamaanka Puntland waxaa wali si xowli ah ku socda badeecooyinka ka soo dega dekedda Berbera ee Somaliland, waxaana maagaalooyinka waaweyn ee Puntland lagu dhex arkayaa gaadiid xanbaarsan konteenaro laga keenay Berbera.
Somaliland ayaa konteenarada ka soo dega dekedda Berbera ka qaada khidmad kaliya, halka Puntland ay ku canshuurto Kastamka Tukaraq, waxaana daagiidka badeecooyinkaas soo qaada intooda badan laga leeyahay deegaanada Somaliland.
Mid ka mid ah daadiidka konteenarada ka soo qaada Berbera
Badeecooyin badan oo ka yimaada China, Turkey iyo meelo kale ayaa hadda si toos ah u yimaada dekedda Berbera, kuwaas oo gaadiid ku soo daabulo Puntland, halka markii hore lagu soo furfuri jiray Dubai iyo Salaalah, kadibna doonyo loogu soo qaadi jiray Puntland.
Macaamilka ganacsi ee Somaliland iyo Puntland ayaa imanaya, iyadoo labada maamulka ay ku muransan yihiin gobolada Sool, Sanaag iyo Ceyn oo dhowr jeer dagaallo dhiig ku daatay ku dhexmaray labada dhinac.
Previous Madaxweyne Biixi Oo Ka Hadlay Weerar Dhexmaray Kornayl Caare Iyo Ciidanka Qaranka
Next Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo horumarinta Jadadka Somaliland iyo Wafti uu hogaaminayo oo gaadhay Degmada Gar-adag ee Gobolka Sanaag, ayaa daah-furay weji labaad oo dhismaha Wadada isku xidha Goboladda Togdheer iyo Sanaag,